२०७५ कात्तिक १४ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
विमानस्थल निर्माणबारे दबाबमूलक बहस
प्रस श्रेष्ठ, निजगढ, १३ कात्तिक/ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण छिटोभन्दा छिटो निजगढमा बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ निजगढमा बहस कार्यक्रम गरिएको छ । फास्ट ट्र्याक एयरपोर्ट निर्माण मूल व्यवस्थापन तथा सरोकार समिति निजगढको आयोजनामा सो कार्यक्रम भएको हो । राज्यले ५० करोडभन्दा बढी खर्च गरी विमानस्थलका लागि विभिन्न चरणको कार्य गरिरहेकै बेला रूख कटान, वातावरणीय असरको विषयलाई लिएर विमानस्थल सर्लाहीको सागरनाथका निर्माण गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति केन्द्रीय तहका नेताहरूबाट नैं आउन थालेपछि दबाब दिने उद्देश्यले सो कार्यक्रम गरिएको हो । विमानस्थल निर्माणका लागि चरणबद्धरूपमा भइरहेका कार्यहरूमा पसाह खोलामा तटबन्ध निर्माण सम्पन्न, काटगाउँमा रहेको ११० बिघा नम्बरी जग्गामध्ये ५५ बिघा १२ कठ्ठाको मुआब्जा वितरण भइसकेको र अन्य काम पनि प्रक्रियामा रहेको, सो क्षेत्रको चारैतर्फ र राजमार्गबाट जङ्गल भएर जाने सडकको दुवैतर्फ तारबार गर्ने कार्य भइरहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना बाराका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ अधिकृत विजय यादवले जानकारी दिए । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण
लेखनदास राज हुसेनले किर्ते गरी जग्गा छोरीको नाममा गराए
प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/ वीरगंज महानगर–८ पानीटङ्की निवासी सरिता सिंहले लेखनदास राज हुसेनविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा किर्ते जालसाज मुद्दा दर्ता गरेकी छन् । आज उनले पर्सा जिल्ला अदालतमा लेखनदास हुसेनविरुद्ध किर्ते जालसाज मुद्दा दर्ता गरेको बताइन् । साबिक चोर्नी गाविस–८ निवासी सिंहले अदालतबाट अंश मुद्दामा पाएको ५ कठ्ठा १० धुर जमीन राज हुसेनले मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा छोरी नसिमा परविनको नाममा दर्ता गराएका थिए । सरिता सिंहले अंश मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट पाएको सो जग्गा मालपोत कार्यालयबाट नामसारी गराउने क्रममा लेखनदास राज हुसेनले सरिता सिंहसँग २०७३ सालमा रजिस्टे«शनमा सही सनाखत गराएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा सो रजिस्ट्रेशन प्रयोगमा नआएपछि उनले आपूmले हस्ताक्ष्Fर गरेको रजिस्टे«शन माग गर्दा लेखनदास राज हुसेनले फिर्ता गरेनन् । सोविरुद्ध सिंहले पर्सा जिल्ला अदालतमा एक वर्ष अगाडि करकापको मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । सो बखत लेखनदास हुसेनले अदालतमा प्रतिउत्तर जोड्दा आपूmसँग रजिस्टे«शन नभएको जवाफ दिएका थिए । यसैबीच सोही पुरानो रजिस्टे«शनमा केरमेट गरेर राज हुसेनले सिंहको नाममा रहे
परसवा गोल्डकपः गादीमाई फोरस्टार क्लब सेमिफाइनलमा
प्रस, सेढवा, १३ कात्तिक/ जीराभवानी गापामा जारी परसवा गोल्डकपको आज अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा नवजागृत युवा क्लब दाप सुगौलीलाई पराजीत गर्दै गादीमाई फोरस्टार क्लब रङ्गपुर सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । क्वाटर फाइनल चरणको आज अन्तिम खेलमा गादीमाईले एक गोल अन्तरले सेमिफाइनलको यात्रा सुनिश्चित गरेको हो । आज भएको खेलमा गादीमाईका पवन उरावले गोल गरेका थिए । उनले गरेको गोल अफसाइडबाट भएको भन्दै दाप सुगौलीका क्याप्टेनले केही बेर खेल अवरोध गरेका थिए । पछि आयोजकले भिडियो रेकर्डबाट अफसाइड गोल नभएको देखाएपछि खेल शुरु भएको थियो । दाप सुगौली पाँचौं परसवा गोल्डकपको उपविजेता हो । तर छैठो गोल्डकपमा क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएको छ । आजको खेलको म्यान अफ द म्याच रङ्गपुरका रवि पौडेल घोषित भए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुभाषराउत थारूले पौडेललाई चेक र ट्रफी प्रदान गरेका थिए । रङ्गपुरले सेमिफाइनल वीरगंज युनाइटेडसँग खेल्नेछ । यसैबीच क्वाटरफाइनल खेल सम्पन्न भएपछि बुधवारदेखि सेमिफाइनल खेल शुरु हुँदैछ । पहिलो सेमिफाइनल युवा प्रगति समाज नेपाल सेढवा र न्यु पञ्चम युवा क्लब देकुली धरमपुरबीच हुने आयोजक कमिटीले ज
मधेसको समृद्धि र नेकाको समाजवादी अर्थतन्त्र
विनोद गुप्ता सरकारको ९० प्रतिशत र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लागतमा नेपाल सरकारले तराईका २७६ स्थानीय तहमा ‘मधेस समृद्धि’ कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक आवास, सामुदायिक पूर्वाधार, सडक, कृषि विकास, सरसफाइ, नदी नियन्त्रण, ऊर्जा, विपद् न्यूनीकरणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यो कार्यक्रमको अनुगमन स्थानीय तहको अनुगमन समितिले गर्नेछ । कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै सुगम मानिएका तराई–मधेसका जिल्लाहरू दुर्गम मानिएका पहाडी जिल्लाहरूको तुलनामा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेकोले यस पछौटेपनलाई हटाउन ल्याउन लागिएको बताइएको छ । मधेसको समृद्धिसँग जोडिएकोले यसको विरोध त गर्न सकिंदैन तर केही प्रश्न स्वभावतः खडा हुन्छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेर तीन तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको गठन भइसकेको अवस्थामा प्रदेशलाई उछिनेर सोभैm केन्द्रले यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु पछाडिको उद्देश्य के हो ? स्पष्ट छ यसको अर्थ विकासको नाउँमा राजनीति गर्नु हो । अर्को शब्दमा गणतन्त्रमा प्रदेश सरकारलाई पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशको दर्जा दिएर राख्नु हो । यसैबीच नेपाल
मानव अमानव बन्दैछ
प्राणीहरूमध्ये मानवलाई सर्वोत्कृष्ट प्राणी मानिन्छ । यो मानवले आफैं घोषणा गरेको कुरा हो । शायद अरू कुनै प्रणीले आपूmलाई मानवभन्दा पनि गतिलो ठान्दो हो । मानवको जीवनभन्दा उसलाई आप्mनै जीवन राम्रो लाग्दो हो । संसारको हरेक वस्तु सबै प्रणीले उस्तै देख्छ भन्ने छैन । हामी जुन वस्तु सानो देख्छौं त्यसलाई पंछीले निकै ठूलो देख्छ । जुन आवाज २० मिटरको फरकमा मानिसले सुन्न सक्दैन, त्यो आवाज हात्तीले ५ सय मिटर टाढैबाट सुनिरहेको हुन्छ । त्यसैगरी कुनै वस्तुको रङ्ग मानिस र पशुपक्षीले उस्तै नभएर फरक–फरक देख्ने विज्ञहरू बताउँछन् । बास्ना र स्वाद पनि त्यस्तै हुन्छ । मानवलाई मन नपर्ने गन्ध वा स्वाद कुनै प्रणीको लागि निकै प्रिय होला । भनाइको मतलब मानवले संसारको कुनै वस्तु वा विषयमाथि जुन धारणा बनाएको हुन्छ, अन्य प्राणीको पनि त्यस्तै धारणा हुन्छ भन्ने छैन । मानवले बनाएको नीति नियम तथा चलन अन्य प्रणीले तोड्नु स्वाभाविक हो । किनभने त्यो उसले बनाएको नियम होइन । मानवले जलचर, थलचर र उभयचर प्रणीलाई जबरजस्ती कज्याउन खोज्दा उनीहरूले नमान्नु वा जानकारी नहुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले त मानवको नियम मानवले जस्तै पाल
२०७५ कात्तिक १३ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
छठ घाटबारे झडप ः १० जना घाइते
रवीन्द्रप्रसाद साह, कलैया, १२ कात्तिक/ महागढीमाई नपा–१ गढीमाई मन्दिरको उत्तरतर्फ सार्वजनिक जग्गामा छट घाट निर्माणको विषयलाई लिएर दुई टोलका बासिन्दाबीच झडप भएको छ । झडपमा दुवै टोलका गरी १० जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् । दुवै टोलका बासिन्दाले छठघाटलाई आआप्mनो दाबी गर्दै निर्माण गर्न खोजेपछि झडप भएको बाराका प्रहरी प्रवक्ता रन्जितसिंह राठौरले बताए । सोमवार बिहान मठुवा र कचहरिया टोलका बासिन्दाबीच गढीमाई मन्दिर नजीक सार्वजनिक जग्गामा छठघाट निर्माण गर्ने कुरा नमिल्दा कुटाकुट नै भयो । झडपमा दुवै पक्षले लाठी र बाँसको फट्टा प्रहार गरेका थिए । झडपमा परी मोतीलाल कुशवाहा, अशोक गोंढ, दिलीप कुशवाहा, जयनारायण कुशवाहा, जयनारायण जयसवाल, रामजी महतो, नन्दकिशोर ठाकुर, नरेश मण्डल, रन्देश महतो, झगरू महतोलगायत घाइते भएका छन् । झडपले उग्र रूप लिएपछि सशस्त्र प्रहरी बल, सुरक्षा बेस बरियारपुर र नेपाल प्रहरीले स्थिति साम्य पारेको थियो । घाइतेहरूको उपचार कलैया अस्पतालमा भइरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाराले मठुवाका पाँचजना र कचहरियाका तीन गरी आठजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । समाचार तयार
प्रदेश सरकारबाट ज्येष्ठ नागरिक सम्मानित
प्रस, वीरगंज, १२ कात्तिक/ २ नं प्रदेश सरकारले पर्साका चाजना ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ पर्साद्वारा होटल सम्झनामा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गरेका हुन् । सम्मानित हुनेमा सकली देवी, सुखनी देवी, इस्माइल मियाँ र श्रीमती मानन्धर रहेका छन् । उनीहरूलाई कम्बल, छाता, टर्च र लाठी प्रदान गरी मन्त्री साहले सम्मान गरेका थिए । ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ पर्साका अध्यक्ष पशुपति विक्रम शाहको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री साहले ज्येष्ठ नागरिक समाजको अभिभावक हुन् भन्दै उनीहरूको लागि प्रदेश सरकारले ज्येष्ठ नागरिक मैत्री कार्यक्रमहरू ल्याउन लागेको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरदैलो स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ५ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिंदै उनले वृद्ध अवस्थामा लाग्ने आँखा, दमलगायत रोगको उपचारका लागि विज्ञ टोली लिएर घरदैलोमा पुगी सेवा प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम रहेको बताए । ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रि
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउँदा चाडपर्व मनाउन गा¥हो
प्रस, पचगावाँ (पर्सा), १२ कात्तिक/ सामाजिक सुरक्ष्Fा भत्ता वितरणमा ढिलाइ भएको कारण सो भत्ता प्राप्त गर्नेहरूलाई मर्का परेको छ । चाडपर्वको बेलामा चौमासिक प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्ष्Fा भत्ता दशैंअगावै प्रत्येक वर्ष वितरण हुँदै आए पनि यस वर्ष कात्तिक लागिसक्दा पनि वितरण भएको छैन । जगरनाथपुर गापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कुशवाहाले कोलेनिकाबाट सामाजिक सुरक्ष्Fा भत्ता माग गरिएको र निकासा नभएको कारण वितरणमा विलम्ब भएको बताए । कोलेनिकाका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले स्थानीय तहबाट माग भए अनुसार रकम निकासा गरेर पठाउँदै आएको दाबी गरेका छन् । उनले दुईवटा गापाले माग गरेको र उनीहरूलाई आइतवार नै रकम निकासा गरेर पठाएको जानकारी गराए । पर्सा जिल्लामा एक महानगर, ३ नगर र १० गापा गरी १४ स्थानीय तह छन् । दशैं, तिहार, छठको बेला सामाजिक सुरक्ष्Fा भत्ता नपाउँदा समस्या भएको जगरनाथपुर गापा, मसिहानी निवासी ८० वर्षीया वृद्धा पतियादेवीले बताइन् । उनले सामाजिक सुरक्ष्Fा भत्ता समयमा नपाउँदा चाडपर्वको बेला मिठो–मसिनो खान नपाएको र राम्रFे कपडा लगाउन नपाएको गुनासो गरिन् । उनले आप्mनो आर्थिक आधार नै
भवन डिजाइनमा पार्किङ व्यवस्था नहुँदा सेवाग्रहीको गुनासो
प्रस, रौतहट, १२ कात्तिक/ कर सेवा केन्द्र गौरको भवन निर्माण शुरु भएको छ । आव २०७०–०७१ मा टेन्डर स्वीकृत भए तापनि यसै हप्तादेखि निर्माण शुरु भएको हो । भवनको टेन्डर स्वीकृत भए पनि डिजाइन नदिएको कारण भवन निर्माण हुन नसकेको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । पहिलेको डिजाइन काम नलाग्ने भएपछि स्वीकृत टेन्डरमा रु ३० लाख थप गरी काम शुरु भएको कम्पनीले जनाएको छ । भवनको डिजाइनमा पार्किङ सुविधा नभएकोले निर्माण शुरु भएदेखि आलोचना हुन थालेको छ । भवनको तल्लो भागमा पिसिसी ढलान भएकोले सोही सतहमा पार्किङ व्यवस्था मिलाउन ठेकेदार लगायत सम्बन्धित पक्षसँग सेवाग्रहीहरूले आग्रह गरिरहेका छन् । गौर नगरपालिकाको मूल सडकसँगै जोडिएको भवनमा पार्किङ व्यवस्था नभए सेवाग्रहीलगायत कर्मचारीलाई कठिनाई हुने उनीहरूको भनाइ छ । गौर क्षेत्र वर्षा याममा ढुबानमा पर्ने हुँदा भवनको लिन्टल २ मिटर २५ इन्च उचा गरी तल्लो भागमा पाकिैङ व्यवस्था भए कम खर्चमा सुविधायुक्त भवन निर्माण हुने गौरवासीको तर्क छ ।
युनिसन टि–२० क्रिकेटः माउन्ट हर्मन, होली एन्जल र सनराइज विजयी
प्रस, वीरगंज, १२ कात्तिक/ युनिसन विद्यालय समूह पर्साको आयोजनामा नारायणी रङ्गशालामा जारी युनिसन टि–२० क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज पनि तीन खेल भएको छ । जुनियरतर्पm दुई र सिनियरतर्पm एक खेल भएको खेल संयोजक अरविन्द सिंहले जानकारी गराए । आज भएको पहिलो खेलमा जुनियरतर्पm माउन्ट हर्मनले मास्कोट एकेडेमीलाई ८ विकेटको अन्तरले पराजित ग¥यो । टस जितेर बलिङ गरेको माउन्ट हर्मनले मास्कोटलाई १२ ओभरमा ४७ रन मात्र बनाउन दियो । प्रतिउत्तरमा १०.५ ओभरमा २ विकेटको नोक्सानीले माउन्ट हर्मनले विजय लक्ष्य प्राप्त गरेको थियो । यो खेलको म्यान अफ द म्याच विजय दास घोषित भए । जुनियरतर्पmको दोस्रो खेलमा होली एन्जलले सनराइजलाई आठ विकेटले पराजित ग¥यो । टस जितेर बलिङ गर्दै होली एन्जलले सनराइजलाई १२.५ मा सबै विकेट लिएर ४५ रनमा सीमित पारेको थियो । प्रतिउत्तरमा होली एन्जलले ६ ओभरमा २ विकेटको नोक्सानीमा विजय लक्ष्य प्राप्त ग¥यो । यो खेलको म्यान अफ द म्याच सुभाष यादव घोषित भए । सिनियरतर्पmको खेलमा सनराइज मावि एक विकेटले विजयी भयो । सनराइजले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै न्यु वेभलाई १८.४ ओभरमा सबै विकेट गुमाई १३७
परसवा गोल्डकपः वीरगंज युनाइटेड सेमिफाइनलमा
प्रस, सेढवा, १२ कात्तिक/ जीराभवानी गापामा जारी परसवा गोल्डकपको क्वार्टरफाइनलमा न्यु प्रगतिशील युवा क्लब भवानीपुरलाई पराजित गर्दै वीरगंज युनाइटेड सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । परसवा खेल मैदानमा आज भएको क्वार्टरफाइनलमा न्यु प्रगतिशील युवा क्लब भवानीपुरलाई एकविरुद्ध दुई गोल गरेर वीरगंज युनाइटेडले सेमिफाइनलको यात्रा सुरक्षित गरेको हो । वीरगंज युनाइटेडका अक्षयलाल चौधरी र अनिल श्रेष्ठले एक–एक गोल गरेका थिए । भवानीपुरको तर्पmबाट कालोरीले एक गोल मात्र गर्न सके । आजको खेलका प्रमुख अतिथि वडाध्यक्ष्F उमेशकुमार सिंहले वीरगंज युनाइटेडका अनिश श्रेष्ठलाई म्यान अफ द म्याच घोषित गर्दै रु २ हजारको चेक र ट्रफी प्रदान गरेका थिए । मङ्गलवार क्वार्टर फाइनल चरणको अन्तिम खेलमा नवजागृत युवा क्लब दाप सुगौली र गढीमाई फोरस्टार क्लब रङ्गपुर भिड्ने आयोजक समितिले बताएको छ । प्रतियोगिताको फाइनल कात्तिक १७ गते शनिवार हुनेछ ।
सङ्घीयता राष्ट्रिय बोझ र घाँडो
सुदर्शनराज पाण्डे एकात्मक सरकारमा सम्पूर्ण शक्तिकेन्द्रमा निहित हुन्थ्यो भने सङ्घात्मक सरकारमा शक्तिकेन्द्र र प्रदेशबीच विभाजित भएको हुन्छ । नेपालको दुई छिमेकी देश भारतमा सङ्घात्मक छ भने चीनमा एकात्मक । चीन कम्युनिस्ट मुलुक हो भने भारत प्रजातान्त्रिक । सङ्घात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा केन्द्र र प्रदेशले आआप्mनो क्षेत्रभित्र रही कार्य गर्दछन् । कुनै पनि सरकारले एकअर्काको क्ष्Fेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । सङ्घात्मक अवस्थामा सम्प्रभुता वास्तवमा केन्द्रीय र प्रादेशिक (प्रान्तीय) शासनमा विभाजित गरिएको हुन्छ । सङ्घात्मक व्यवस्थाको स्थापना त्यही देशमा हुन सक्छ जहाँ कैयौं स्वतन्त्र राष्ट्रहरू हुन्छन् । सङ्घात्मक व्यवस्थामा दोहोरो सरकार हुने हुनाले यस्तो व्यवस्थामा नागरिक दुई अधिकारीको मातहतमा हुन्छन् । दोहोरो करको मारमा पर्छन् । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीयमा पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्छ । कुनै पनि सरकारले एक अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भन्ने मान्यता छ । नेपाल पुरानो राज्य हो । बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त देश हो नेपाल । सा
बलात्कार र हत्यामा वृद्धि
दिनहुँ पढिने समाचारहरूमध्ये नबिराई बलात्कारको समाचार आइरहेको हुन्छ । यो समस्या हाम्रो जिल्लामा मात्र होइन, प्रदेशमा, देशमा र विदेशमा पनि त्यतिकै व्याप्त भएको छ । हाम्रो देश त विभिन्न कुरामा पछि परेको छ, तर समृद्ध, विकसित र शिक्ष्Fित मुलुकहरूमा पनि बलात्कार भइरहेको छ । हुनत बलात्कारको सम्बन्ध यौन क्रियासँग हो । यौन पनि भोकजस्तै स्वाभाविक क्रिया हो । तर जसरी हामी भोजनको शुद्धता, आप्mनै कमाइबाट उपलब्धतालाई अनिवार्य ठान्दछौं, त्यस्तो यौनसम्बन्धी क्रियाकलापमा ध्यान दिंदैनौं । हुनत भोको मानिसले खाद्य–अखाद्यको विचार गर्दैन, त्यसैगरी यौनपिपासुले पनि उचित–अनुचितको विचार गर्दैन । यहाँ एउटा टडकारो सत्य के देखिएको छ भने भोकको सम्बन्ध जहाँ जैविक आवश्यकताको सामान्य आपूर्ति हो, यौनेच्छा थोरै जैविक र बढी बाह्य उत्प्रेरणाबाट भइरहेको छ । यौन उच्छृङ्खल भएर पिपासामा परिणत नहोस् भनेर नै विवाहरूपी सामाजिक बन्धन बनाइएको हो । तर पशु जसलाई कुनै बन्धन हुँदैन, उसले बलात्कार गर्दैन, मानिसले नै किन बलात्कार गर्छ ? यसमा बाह्य उत्प्रेरणाले जिम्मेवार हुन सक्छ । पहिलेको जमानामा पनि बलात्कार हुन्थ्यो । पहिले मा
२०७५ कात्तिक १२ गते सोमवारको प्रतीक दैनिक
क्यान्सर निम्त्याउने एस्बेस्टसको आयात न्यूनीकरणतर्फ, भित्रिएकाको व्यवस्थापनमा चुनौती
प्रस, परवानीपुर, ११ कात्तिक/ क्यान्सर रोग निम्त्याउने एस्बेस्टसको आयात वर्षेपिच्छे घट्दो क्रममा छ । आइतवार वीरगंज नगर सभागृहमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा सो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । ‘क्यान्सरजन्य एस्बेस्टस प्रतिबन्धबारे निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ विषयक गोष्ठीमा आयातको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै भन्सार विभागका प्रयोगशाला निर्देशक मनोजनिधि वाग्लेले सो जानकारी गराउँदै २०७२ सालभन्दा पहिले भारत भएर नेपालमा लाखौं किलो एस्बेस्टस भित्रिएको बताए । २०७२ असार ५ गतेदेखि नेपाल सरकारले एस्बेस्टसको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि आयातमा धेरै कमी आएको हो । उनले पहिले लाखौं किलोको परिमाणमा आउने सामान अहिले हजार किलोको परिमाणमा आइरहेको बताए । विशेषगरी घरमा छानो लगाउन एस्बेस्टस नेपालमा आयात गरिन्थ्यो । त्यसैगरी, गाडीको क्लच प्लेट, ग्यासकिट, स्टोभको वासरलगायतका सामानको रूपमा नेपालमा हाल पनि एस्बेस्टस नेपाल भित्रिरहेको छ । तर भन्सारको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा एस्बेस्टसजन्य सामग्री भारत वा विदेशबाट अति न्यून परिमाणमा भित्रेको छ । प्रतिबन्ध लगाउनुअघि वार्षिक ८२ लाख किलोको हाराहारी
हात्तीले झन्डै १६ लाख मूल्यको धानबाली नष्ट
प्रस, ठोरी, ११ कार्तिक/ ठोरी गाउँपालिका–२ इच्छानगरमा झन्डै एक महीनासम्म लगातार गाउँ पसेर आतङ्क मच्चाएको जङ्गली हात्तीले धानबालीमा ठूलो क्षति गरेको छ । ९७ घरधुरी रहेको इच्छानगरमा गत असोज १४ गतेदेखि लगातार २२ दिनसम्म जङ्गली हात्ती गाउँ पसेर उपद्रो मचाउँदा झन्डै २५ बिघा खेतको पाक्न लागेको धानबाली नष्ट गरेको स्थानीय शिक्षक लक्षमण बखतीले बताए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सम्साँझै गाउँ पस्ने हात्तीले रातभर धानबालीमा रजाईं गर्दा १५ लाख ७५ हजार मूल्य बराबरको झन्डै ७५० क्विन्टल धान उत्पादन हुने खेती नष्ट गरेको उनले बताए । खेतीयोग्य उर्वर भूमि रहेको इच्छानगरमा प्रतिबिघा झन्डै डेढ क्विन्टल धान उत्पादन हुँदै आएको छ । झन्डै १०० बिघा खेती योग्य जमिन रहेको इच्छानगरमा यो वर्ष ६० बिघामा धानबाली लगाइएको बखतीले बताए । इच्छानगर क्षेत्रमा मात्रै यो वर्ष ३७ लाख ८० हजारको १ हजार ८ सय क्विन्टल धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको थियो । हात्तीले खानुका साथै कुल्चेर धानबाली नष्ट गरेपछि यो वर्ष धान उत्पादनमा ¥हास आउने बखतीले बताए । प्रत्येक वर्ष इच्छानगर क्षेत्रमा उत्पादन भएका धान स्थानीय कि
प्रजिअले समातेको ढाला प्रहरीले लान सकेन
प्रस, पोखरिया, ११ कात्तिक/ गिटी तस्करी गर्दागर्दै नियन्त्रणमा लिइएका ट्याक्टर तथा ढालालाई वीरगंजतर्पm लान खटिएको प्रहरी रित्तो हात फर्किएको छ । यही कात्तिक ९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको सीमा गस्ती टोलीले छिपहरमाई गाउँपालिकाको टिहुकीमा १३ वटा ढाला गिटी लोड अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । भारततर्पm गिटी तस्करी गर्न थालेको आशङ्कामा नियन्त्रणमा लिइएका उक्त ढालाहरू प्रहरी चौकी टिहुकीको निगरानीमा राखिएको थियो । कारबाई प्रक्रियाका लागि आज ट्याक्टर र ढाला लिन टिहुँकी पुगेका सुरक्षाकर्मीहरूलाई ट्याक्टरधनी पक्षले अवरोध गरेपछि रित्तै फर्कनुपरेको हो । गिटी तस्करीको लागि नभई आआप्mनो घर प्रयोजन एवं गाउँटोलामा निर्माण कार्यको लागि ल्याइएको र प्रजिअको टोलीले घरघरबाट ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको ट्याक्टरधनीहरूको जिकिर छ । आज प्रहरी पुग्दा सयौंको सङ्ख्यामा स्थानीयहरू सडकमा उत्रिएका थिए । तस्करलाई समात्ने हो भने सीमा पार गरिरहँदा समात्न उनीहरूले चुनौती दिए । स्थानीयले ट्याक्टर र सबै ढालाको चक्काको हावा खोलिदिएपछि प्रहरी चुपचाप फर्कनुपरेको सुरक्षा टोलीका सदस्यहरूले बताए ।
क्वाटरफाइनलमा सेढवाको रोमाञ्चक जीत
प्रस, सेढवा ११ कात्तिक/ जीराभवानीमा जारी परसवा गोल्डकपको दोस्रो क्वाटरफाइनलमा युवा प्रगति समाज सङ्घ नेपाल सेढवाले रोमान्चक जीत हात पारेको छ । हाम्रो पूmटवल क्लब वीरगंजसँग भएको प्रतिस्पर्धामामा सेढवाले ० विरुद्ध २ गोलले विजय भएको छ । प्रतिस्पर्धामा सेढवाका स्ट्राइकर जर्सी नं १० का अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी अफिज ओलाओलेले दुई गोलगरी टीमलाई जिताएका छन् । खेलको ३५ औ मिनेटमा जर्सी नं ११ का खेलाडी रवि यादवको कर्नर पासबाट ओलाओलेले गोल गरेका हुन् । त्यस्तै खेलको ६४ औ मिनेटमा ओलाओलेले अर्काे गोल थपे । आजको खेलमा वीरगंजको जर्सी नं ८ का खेलाडी सुरेश चौधरीले म्यान अफ द म्याचको उपाधि पाउन सफल भए । अब सेढवा न्यु पञ्चम युवा क्लब देकुली धर्मपुरसँग सेमिफाइनलमा भिडने छ । भोलिको तेस्रो क्वाटरफाइनल खेल वीरगंज युनाइटेड र न्यु प्रगतिशील युवा भवानीपुरबीच हुने आयोजक समितिले जनाएको छ ।
जुनियरतर्फ होली एन्जल र मास्कोट तथा सिनियरतर्फ विद्यासदन विजयी
प्रस, वीरगंज, ११ कात्तिक/ युनिसन विद्यालय समूह पर्साले सञ्चालन गरेको युनिसन टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता–२०७५ अन्तर्गत आइतवार दोस्रो दिन तीनवटा खेल सम्पन्न भए । जुनियरतर्पm भएको दुई खेलमा होली एन्जल र मास्कोट विजयी भए भने सिनियरतर्पm भएको एक खेलमा विद्यासदन मावि विजयी भएको खेल संयोजक अरबिन्द सिंहले बताए । आज सम्पन्न पहिलो खेलमा जुनियरतर्पm होली एन्जलले मनकामना माविलाई २ विकेटले पराजित गरेको थियो । होली एन्जलले टस जितेर बलिङ गरेको थियो । मनकामनाले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर ८० रनमा सीमित भएको थियो । प्रतिउत्तरमा होली एन्जलले १८.४ ओभरमा ८ विकेटको नोक्सानीमा विजयी लक्ष्य हासिल ग¥यो । यसैगरी, दोस्रो खेलमा जुनियरतर्पm मास्कोटले न्यु वेभलाई दुई विकेटअन्तरले पराजित ग¥यो । टस जितेर न्यु वेभले ब्याटिङ गर्दै १४.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ७० रन बनाएको थियो। प्रतिउत्तरमा मास्कोटले १५.१ ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा विजयी लक्ष्य पूरा गरेको थियो । यस्तै, तेस्रो खेलमा सिनियरतर्पm विद्यासदनले माउन्ट हर्मनलाई ३ विकेटले पराजित ग¥यो । माउन्ट हर्मनले पहिले ब्याटिङ गर्दै नौ विकेटको ८० रन जोडेको थिय
राष्ट्र निर्माणमा विद्यार्थीको भूमिका
अनन्तकुमार लाल दास राष्ट्र भनेको मानिसहरूकोे समूह हो, जो एउटा निश्चित भूभागमा आप्mनो सरकारको व्यवस्थामा बसोवास गर्दछ । दोस्रो ‘निर्माण’ भन्नाले यहाँ भवन निर्माण होइन, विकाससँग सम्बन्धित छ । यस अर्थमा राष्ट्र निर्माण भन्नाले देश विकासलाई सम्झनुपर्छ । एकजना विचारकका अनुसार “देश भनेको माटो होइन, मानिसलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ ।” यस कारण यसको भित्री अर्थ मानव विकाससँग जोडिएको छ किनभने कुनै पनि देशको विकास त्यहाँ बसोवास गर्ने मानिसद्वारा नै सम्भव हुन्छ । मानिसले नै राष्ट्रलाई बलियो बनाउन अथक परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतका पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलामका अनुसार–“राष्ट्रको विकासको कुरो त्यहाँ बसोवास गर्ने मानिसहरूको सोचाइमा निर्भर हुन्छ ।” अब प्रश्न उठ्छ राष्ट्र र विद्यार्थीबीच के सम्बन्ध छ ? सबैभन्दा पहिले हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने मानिसले आप्mनो सोच, कल्पना शक्ति र कर्तव्य पालनले आप्mनो देशलाई महान् बनाउन सक्छ । यस अर्थमा विद्यार्थी यदि बीउ हो भने मानिस त्यस बीउबाट उम्रेको रूख । एउटा राम्रो बीउले नै राम्रो रूख प्रदान गर्छ र राम्रो रूखले नै मीठो फल दिन्छ । एउटा विद्यार्थ
प्रदूषण खासगरी जल–प्रदूषण, त्यसमा पनि कुनै शहर छेउको नदी–प्रदूषण सा¥है पीडादायी हुन्छ । नदीलाई हिन्दू धर्मले पवित्र मानेको छ । नदीमा नित्य स्नान गर्नु, सम्भव नभए विशेष धार्मिक अवसरमा स्नान गर्न त धर्मशास्त्रहरूले निर्देश नै दिएका छन् । जललाई देवता नै मानिएको छ । त्यतिमात्र होइन, नदीछेउमा सभ्यताको विकास भएको थियो । आज पनि नदी कुनै नगरको समीप हुनुलाई सौभाग्यको कुरा ठानिन्छ । र विश्वकै नक्शामा दृष्टि घुमाउने हो भने नदी जति ठूलो छ, त्यति नै ठूलो र विभिन्न विशेषतासहितको नगर त्यसछेउ हुर्केको पाइन्छ । भूगोलले सबैलाई बराबर अवसर दिन सक्दैन, कहीं ठूला नदी छन् भने कहीं साना । नदी सानो हुँदैमा त्यसको धार्मिक, सामाजिक र वैज्ञानिक महŒव समाप्त हुँदैन । नदीले जलवायु नियन्त्रणका साथै मौसमलाई स्थिर राख्न मदत गर्दछ । यसले गरीबका लागि आयको स्रोत जुटाइदिन्छ । कृषकका लागि त नदीको उपयोग र लाभ बहुआयामी हुन्छ । यसले पशुधनको बढोत्तरी गर्छ, सिंचाइमा सहयोग पु¥याउँछ । जैविक विविधतालाई टेवा पु¥याउँछ । यसै नदीलाई केही उद्योगको सहुलियतका लागि दूषित हुन दिइन्छ भने त्योजस्तो मूढमति के होला ? आज त्यसै विषमताको
२०७५ कात्तिक ११ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
श्रीसिया खोला प्रदूषण गरेको अभियोगमा महानगरसहित १० वटा उद्योगविरुद्ध मुद्दा
प्रस, परवानीपुर, १० कात्तिक/ वीरगंज भएर भारततर्पm बग्ने श्रीसिया खोलामा प्रदूषण गरेको भन्दै पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको छ। पर्साका अधिवक्ता सुरेन्द्र कुर्मीले यसै वर्षदेखि मुलुकी ऐन अनुसारको दूषित मुद्दा भन्ने शीर्षकमा अदालतमा मुद्दा हालेका हुन्। सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले हाल कानूनमा व्यवस्था रहेको प्रक्रिया अपनाएर मुद्दा दायर गरेको अधिवक्ता कुर्मीले प्रतीकलाई बताए। वीरगंज महानगरसँगै पर्सा लिपनीबिर्तामा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको सुशील वनस्पति प्रालि, स्टेन्डर लेदर, मरियम लेदर, नेशनल लेदर, नेपाल लेदर, ग्लोबल लेदर, निम्स प्रालि, अरनिका प्रोसेसिङ, अड्ढिता टेक्सटाइल्स, कन्साई नेरोलेक पेन्ट्स गरी ११ वटा प्रतिवादीमाथि शुक्रवार पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। पहिलेको मुलुकी ऐनमा यो अधिकार नभएको, हाल जारी मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ दफा १११ को व्यवस्था अनुसार मुद्दा दायर भएको मुद्दाका वादी कुर्मीले बताए। पिउने पानीबाहेक अन्य प्रयोजनको लागि हुने पानी दूषित गर्नेलाई ६ महिना कैद र ५ हजार जरिवाना तिराउने व्यवस्था भएकोले श्रीसिया खोलालाई प्रदूषणरहित बनाउन
गाउँसभा नहुँदा विकासका काम प्रभावित
प्रमोद यादव, पँचगावा (पर्सा), १०/कात्तिक पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय तह अन्तर्गत गापाहरूले दोस्रो गाउँसभा हालसम्म सम्पन्न गर्न नसक्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको छ। गाउँसभा हुन बाँकी गापाहरूमा नयाँ विकासका काम हुन सकेका छैनन् भने पुराना कामको भुक्तानी हुन नसक्दा आधाअधूरा अवस्थामा छन्। विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, नाला, कल्र्भट, युवा स्वरोजगार र सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू हुन सकेका छैनन्। पहिलो गाउँसभा २०७४ पुस मसान्तमा सम्पन्न गरेका कतिपय गापाले चालू आवको चौथो महिना बित्न लाग्दा पनि गाउँसभा गर्न सकेका छैनन् । गाउँसभा नभएको गापामा कर्मचारीले तलब सुविधा पाउन सकेका छैनन् भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वितरण हुन सकेको छैन। चाडपर्वको बेला सामाजिक सुरक्षाभत्ता नपाएर ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग, दलित, बालबालिकाहरूलाई मर्का पुगेको छ। गाउँसभा नगरेर विकासका काम अगाडि बढाउन सकिन्न। तर गाउँसभा गर्नेतर्पm जनप्रतिनिधिहरूले चासो देखाएका छैनन्। पर्साको जगरनाथपुर, जीराभवानी, कालिकामाई, धोबिनी, पकाहा मैनपुर, विन्दवासिनीमा दोस्रो गाउँसभा हुन सकेको छैन। ख
पोलियो दिवस, वीरगंजमा र्याली
प्रस, वीरगंज, १० कात्तिक/ रोटरी क्लब तथा रोट्रयाक्ट क्लब अफ वीरगंज तथा रोटरी र रोट्रयाक्ट क्लब अफ वीरगंज मेट्रोपोलिसको संयुक्त आयोजनामा पोलियो दिवस मनाइएको छ। ‘इन्ड पोलियो’को नारासहित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट ¥याली निकालिएको थियो। ¥याली नगरपरिक्रमापछि घण्टाघरमा समापन भएको थियो। रोटरीको आयोजनामा प्रत्येक वर्ष पोलियो दिवसको अवसरमा ¥यालीलगायतका कार्यक्रम आयोजना हुँदै आएको छ। ¥यालीमा वीरगंज स्काउट, गौतम, ज्ञानदा, डिएभीका बालबालिकाहरू, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्तालगायतको सहभागिता थियो।
सफलता हासिल गरेका विद्यार्थीहरूको अनुभव साझेदारी
प्रस, वीरगंज, १० कात्तिक/ फेसबूक समूह आइ.ओ.ई. इन्ट्रान्स हेल्प डेस्कद्वारा नेशनल इन्फोटेक क्याम्पस, वीरगंजमा शनिवार एक अनुभव आदानप्रदान तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भयो। अनुभव साझेदारीका लागि प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीहरू माझ अन्तत्र्रिmया भएको थियो । प्रदेश २ स्थित बारा, पर्सा, रौटहट जिल्लाबाट छात्रवृत्तिसहित इन्जिनियरिङ र मेडिकलमा नाम निकाल्न सफल भएका विद्यार्थीहरू कार्यक्रमका मुख्य आकर्षक थिए। तीमध्ये अधिकांश विद्यार्थीले प्लस टु वीरगंकै क्याम्पसबाट गरेको बताए। सफल भएका विद्यार्थीहरूले आआप्mनो सङ्घर्ष र सफलताबाट अरूलाई पनि सघाउ पुगोस् भन्ने उद्देश्यले फेसबूक समूह गठन गरेका छन्। हालसम्म करिब ३ हजार विद्यार्थी सो समूहमा आबद्ध रहेको समूहका संस्थापक मनीष जयसवालले कार्यक्रममा बताए। जयसवालका अनुसार ककतिपय विद्यार्थी कडा परिश्रम गरे पनि ससाना विषयमा ध्यान नपु¥याउँदा असफल हुने गरेका छन्। यसर्थ पनि अनुभव साझेदारी सफलताको एउटा कोसे ढुङ्गा हो। कार्यक्रममा अंकु जयसवाल–नेपाल विद्याभूषण पदक २०१८, अतुलकुमार कर्ण–आइओई टपर २०७५, अरबिन्द गुप्ता–आइओई टपर–२०७२, गौरवकुमार गुप्ता– मेडिकल
दुईजना चिनियाँ नागरिक पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १० कात्तिक/ भारतीय अध्यागमन विभागको कार्यालय रक्सौलले दुईजना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। नेपाली मोटरसाइकलबाट रक्सौल प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा अध्यागमन विभागले दुईजना चिनी नागरिकलाई पक्राउ गरेको बताएको छ। पक्राउ परेका दुईजना चिनी नागरिकबाट मोबाइल, चिनी नागरिक भएको पासपोर्ट, पहिचानपत्र बरामद भएको छ। अध्यागमन विभागले बाङ जेकुङ, लिकाङ्गु नाम गरेका दुईजना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको जनाएको। दुवैको उमेर २३ वर्ष रहेको छ। पर्यटन भिसाबाट दुवैजना चिनियाँ नागरिक नेपालमार्पmत् भारत प्रवेश गरेका हुन्। रक्सौल र हरैया पुलिसले पक्राउ गरेका दुईजना चिनियाँ नागरिकविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ। पक्राउ परेका दुवैजनालाई तत्कालका लागि मोतीहारी कारागार चलान गरिएको छ।
विपी कोइरालाको सिद्धान्तमा आर्थिक नीति बनाउन काङ्ग्रेस अग्रसर
प्रस, परवानीपुर, १० कात्तिक/ पछिल्लो चुनावमा नराम्री पराजित भएको नेपाली काङ्ग्रेसले संस्थापक नेता विपी कोइरालाको सिद्धान्तमा आर्थिक नीति (दस्तावेज) बनाउन अग्रसर देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा दस्तावेज बनाउन सुझाव सड्ढलन समिति गठन गरी देशभरिका क्षेत्रबाट सुझाव लिन पठाएको छ। हिजोदेखि कार्यक्रम थालेको समितिले शनिवार वीरगंजमा पनि अन्तक्र्रिया गरी सुझाव लिएको हो। वरिष्ठ नेता संयोजक रहेको टोलीमा पूर्वमन्त्री एनपी साउद, केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ, गोविन्द भट्टराई, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पोषराज पाण्डेलगायतका नेताहरूको सहभागिता थियो। वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा सङ्घकै सभाकक्षमा भएको कार्यक्रममा वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीहरूले निराशायुक्त वाणीबाट आप्mनो गुनासो राखेका थिए। ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्रले देशको अर्थतन्त्र जटिल मोडबाट गुज्रिनुमा नेपाली काङ्गेसले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । उनले देशमा सबैभन्दा बढी शासन गरेको काङ्ग्रेसले खाली रा
ठोरीको इच्छानगरमा बिजुली बत्ती बल्यो
प्रस, ठोरी, १० कात्तिक/ ठोरीको इच्छानगरमा पहिलोपटक बिजुली बत्ती बलेको छ। साबिक ठोरी गाविसको अन्य वडामा भने दुई वर्षअगाडिदेखि बिजुली बत्ती बलेको थियो । इच्छानगरमा बिजुली बत्ती बलेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। नजिकको गाउँहरू दुई वर्षदेखि झलमल बलेको तर आप्mनो गाउँ टुकीको सहारामा बस्न बाध्य भएकोले इच्छानगरवासीहरू निराश थिए। साबिक ठोरी–९ इच्छानगरमा लामो कसरतपछि कात्तिक ७ गतेदेखि बिजुली बत्ती बल्न शुरु भएको छ। अहिले झन्डै ४३ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीबत्ती बलेको स्थानीय शिक्षक लक्ष्मण बखतीले बताए। इच्छानगरमा ९७ घरधुरी छ, जसमध्ये ४२ घरधुरीमा अहिले बिजुली बत्ती बलेको छ। इच्छानगरको मुख्य सडकछेउका घरधुरीमा विद्युतीकरणको काम सकिएकोले सो ठाउँका घरधुरीलाई बिजुलीबत्ती उपलब्ध छ। सडक छेउछाउ बाहेकाको घरधुरीमा बिजुलीबत्ती जडानका लागि पोल गाड्ने, तार तान्ने काम भइसकेको छैन। ठोरी गाउँपालिकाको वडा नं १ र २ को केही क्षेत्रमा समेत अहिलेसम्म बिजुलीबत्ती पुग्न सकेको छैन। सरस्वतीनगर, हनुमाननगर र गौतमनगरको फायरलाइन क्षेत्रमा बिजुली बत्ती पुग्न सकेको छैन। ठोरीमा २०७३ पुस २२ गते पहिलोचोटि बिजुली ब
प्रहरीले ठूलो परिमाणमा पटाका समात्यो
प्रस, निजगढ, १० कात्तिक/ इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढले ३ लाख मूल्य बराबरको विष्फोटक पदार्थ पटाका शनिवार बिहान बरामद गरेको छ। राजमार्गको निजगढ—पथलैया सडकखण्डको काटघाट मन्दिर जाने सडक आसपासको झाडीमा लुकाइ राखेको ६ वटा बोरामा पटाका फेला परेको प्रहरी निरीक्षक विक्रम लामाले बताए। प्रहरीलाई देख्नेबित्तिकै शड्ढास्पद व्यक्तिहरू फरार भएको प्रनि लामाले बताए। दीपावली, छठ पर्वलाई लक्षित गरी केही गिरोहले अवैधरूपमा भारतका विभिन्न नाकाबाट उक्त विष्फोटक पदार्थ पटाका नेपाल भिœयाएको प्रहरीको भनाइ छ। विस्फोटक पदार्थ भएकोले पटाकाको खरिद, बिक्री, उत्पादन एवं ओसारपोसारमा मुलुकको प्रचलित ऐन कानूनले निषेध गरेको छ।
घाँटी काटेको अवस्थामा शव फेला
प्रस, पथलैया, १० कात्तिक/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले शनिवार राति घाँटी काटेको अवस्थामा एकजना वृद्धको शव फेला पारेको जनाएको छ। कलैया उपमहानगरपालिका–२३ कोहिरियामा ६५ वर्षीय नन्दलाल पटेलको शव घाँटी काटेको अवस्थामा फेला परेको जिप्रका बाराले जनाएको छ। घटनास्थलमा बारा प्रहरीका प्रवक्ता रञ्जीतसिंह राठौरसहितको टोली पुगेको थियो। घटनाको वस्तुस्थिति तत्काल थाहा हुन सकेको छैन।
१८४ दुर्घटनामा ९२ को मृत्यु, रु ६८ लाखको क्षति सवारीचालकको कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी दुर्घटना
प्रस, जीतपुर, १० कात्तिक/ सवारी चालकको लापर्बाहीको कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी दुर्घटना भइरहेको छ। मादकपदार्थ सेवन, निद्रा, मोबाइल फोन प्रयोग, तीव्रगति, ओभरटेकलगायतका कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी दुर्घटना भएको प्रहरी अधिकारीको दाबी छ। बाँकी १० प्रतिशत सवारी दुर्घटना पैदलयात्री, सडकको खराबी र अन्य कारणले हुने गरेको २ नं प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाले जनाएको छ। २ नं प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाका अनुसार चालू आव २०७५/०७६ को साउन–असोज ३ महिनामा एक सय ८४ पटक सवारी दुर्घटना भई ६६ जना पुरुष, २२ जना महिला, ८ जना बालक, ५ जना बालिका र एक चौपाया गरी ९२ जनाको ज्यान गएको छ। प्राप्त विवरण अनुसार सवारी चालकको लापर्बाहीका कारण १७२ पटक, सवारीधनीको ओभरटेक र यान्त्रिक गडबढीका कारण ४ पटक, पैदल यात्रुको कारण ६ पटक र छाडा चौपायाले गर्दा २ पटक सवारी दुर्घटना भएको प्राप्त विवरणमा जनाइएको छ । “सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा जीउधनको सुरक्षाको लागि खराब दुर्घटनाको प्रकृति बमोजिम शराबी चालकलाई कैदको व्यवस्था हुनु जरुरी छ।” क्रिया खर्च र क्ष्Fतिपूर्ति रकम रु ५ लाख २५ हजारले सव
जुनियरतर्पm माउन्ट हर्मन र सिनियरतर्फ होली एन्जल विजयी
प्रस, वीरगंज, १० कात्तिक/ युनिसन टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिवारदेखि शुरु भएको युनिसन विद्यालय समूह पर्साले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा जुनियरतर्पm माउन्ट हर्मन र सिनियरतर्पm होली एन्जल स्कूल विजयी भएका छन्। नारायणी रङ्गशालामा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा जुनियतर्पm माउन्ट हर्मनले विद्यासदनलाई ४ विकेटले पराजित गरेको थियो। टस जितेर माउन्ट हर्मनले बलिङ गरेको थियो भने ब्याटिङ गरेको विद्यासदनले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै ९३ रन बनाएको थियो। प्रतिउत्तरमा १५.२ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर माउन्ट हर्मनले लक्ष्य हासिल गर्दै विजयी भएको हो। सिनियरतर्पmको खेलमा होली एन्जलले मास्कोट एकेडेमीलाई ७९ रनअन्तरले पराजित गर्दै विजयी हासिल गरेको छ। टस जितेर होली एन्जलले ब्याटिङ गर्दै २० ओभरको खेलमा ९ विकेट गुमाएर १३९ रन बनाएको थियो। प्रतिउत्तरमा मास्कोट एकेडेमी ११.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ६९ रनमा सीमित रह्यो। आजको खेलमा जुनियरतर्पm सुभाष पराजुली र सिनियरतर्पm विराज यादव म्यान अफ द म्याच घोषित भए। यसअघि प्रतियोगिताको उद्घाटन वीरगंज महानगरका मेयर विजय सरावगीले
प्रणाम गरौं– आशीर्वाद लिऔं
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम्।। अर्थात्– जो व्यक्ति आपूmभन्दा ठूलालाई दिनहुँ प्रणाम एवं उनको नित्यरूपले अभिवादन गर्छ, त्यस व्यक्तिको चार कुरामा वृद्धि हुन्छ– आयु, विद्या, यश र बल। हाम्रो संस्कृतिमा प्रणाम वा अभिभावदनको परम्परा लामो समयदेखि रहिआएको छ। श्रीरामचरितमानसको बालकाण्डमा भगवान् श्रीरामको दिनचर्या उल्लेख छ, जसमा सबैभन्दा पहिले उनको प्रातःकालमा उठेर आपूmभन्दा ठूला एवं गुरुजनलाई प्रणाम गर्ने कुरा भनिएको छ– प्रातकाल उठि कै रघुनाथा। मातु पिता गुरू नावहिं माथा।। आयसु मागि करहिं पुर काजा। देखि चरित हरषइ मन राजा।। (रा.च.मा., बालकाण्ड २०४/४) अर्थात्– श्री रघुनाथजी प्रातःकाल उठेर मातापिता र गुरुलाई मस्तक गर्दथे र उनको आज्ञा लिएर नगरको काम गर्दथे। उनको चरित्र हेरेर राजा मनमनै बडो हर्षित हुन्थे। हाम्रFे शास्त्रमा प्रणाम गर्ने परम्पराको उल्लेख वर्षौंदेखि पाइन्छ। प्रणामको भावबाट जब पनि कुनै व्यक्ति आपूmभन्दा ठूलासमक्ष्F जान्छ, तब त्यो प्रणीत हुन्छ। प्रणामको सीधा सम्बन्ध प्रणीतसँग छ, जसको अर्थ हो– वि
हिंड्दैछ पाइला मेट्दैछ
ओमप्रकाश खनाल यसै साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिमा आधारित एउटा समाचार आयो– अब भान्सामा ग्यासको पाइपलाइन होइन, बिजुलीको तार। यो समाचारले मलाई भने केही समयअघि मात्र पूर्वी नेपाल पुगेर अरूले तारतम्य मिलाएर ठीक्क पारिदिएको ग्यास पाइपलाइन उद्घाटन गरेर यिनै प्रधानमन्त्री ओलीले जस बटुल्ने मेलो मिलाएको दृश्य स्मरण गराइदियो। तीन वर्षअघि भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउँदा प्रधानमन्त्रीको आसनबाट ओलीले नै घरघरमा ग्यासका पाइप पु¥याउने उद्घोष गर्दा उनकै कार्यकर्ताको हाँसोको फोहरा छुटेको थियो। आधा सिलिन्डर ग्यासका लागि हप्ता दिन लाइनमा उभिन बाध्य जनताले त्यतिबेला भान्सामा ग्यासलाइनको कुरा होओस् वा हावाबाट बिजुली निकाल्ने सन्दर्भ सबैलाई हावामैं उडाइदिए। समुद्रमा नेपाली झन्डावाला पानीजहाज कुदाउनेसम्मका तानाबाना मौजुदा आवरणमा ओलीकै उत्पादन हुन् । पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता र वार्षिक बजेटमा यस्ता योजना समावेशजस्ता प्रक्रिया अघि नबढेका होइनन्। तर कार्यान्वयनका आधारहरूको कमजोर धरातलमा यी फगत लोकप्रियता र वाहवाही बटुल्ने औजारबाहेक अन्य हुन् भन्नेमा आशङ्काको ओज नै बढी देखिन्
२०७५ कात्तिक १० गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
ह्युमपाइप विवाद चुलिंदै, कालिकाद्वारा एडिबीसँग रु २ करोड ८० लाख मागदाबी
प्रस, वीरगंज, ९ कात्तिक/ वीरगंजमा एडिबीद्वारा सञ्चालित मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार परियोजनाको काममा अन्तिम चरणमा आएर ह्युमपाइपलाई लिएर विवाद शुरु भएको छ । एडिबीले शुरुमा बनाएको नापनक्शा अनुसार कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई विभिन्न आकारको १ हजार ह्युमपाइप बनाउनुपर्ने थियो । तर चार वर्षअगाडि परियोजना शुरु हुँदा वीरगंजको मेनरोड सडक विभाग र महानगरपालिकाले फराकिलो गर्न नसकेपछि शुरुको योजनामा परिवर्तन गरिएको थियो । एडिबीको शुरुको नापनक्शा अनुसार गण्डकदेखि छपकैयासम्म मेनरोडमा ह्युमपाइप जडान गर्नुपर्ने थियो । सोहीअनुरूप कालिका कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता गरेपछि ह्युमपाइप बनाउने काम शुरु गरेको थियो । दुई वर्ष लगाएर निर्माण गरेको ह्युमपाइप पछि मेनरोड फराकिलो नभएपछि मेनरोडको योजना अन्यत्र सारिएको थियो । अन्यत्र सारिएको योजनामा ह्युमपाइप जडान भएन । अहिले परियोजनाको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । यो अवधिमा १० प्रतिशत काममा मात्र एडिबीले ह्युमपाइप जडान गर्न शुरु गरेको हो । तर कालिका कन्स्ट्रक्सनले शुरुमा भएको सम्झौता अनुसार एक हजार थान विभिन्न आकारको ह्युमपाइप तयार गरेर सो अनुसारको भुक्तानी
गिटी तस्करीमा संलग्न १३ वटा ट्याक्टर प्रजिअको छड्केमा
धर्मेन्द्र चौरसिया, पोखरिया, ९ कात्तिक/ नेपालबाट गिटी तस्करी गरी भारत पु¥याउने तयारीमा रहेका १३ वटा ट्याक्टर पक्राउ परेको छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौड्यालको टोलीले गिटीसहित ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो । शुक्रवार बिहान करिब ९ बजे प्रजिअ नेतृत्वको टोली सीमा अनुगमन गर्दै छिपहरमाई गाउँपालिका पुगेको थियो । सो गाउँपालिकाको वडा नं २ स्थित टिहुकी अन्तर्गत नेपाल–भारत दशगजाछेउमैं गिटी लोड अवस्थामा १३ वटा ट्याक्टरको ढाला देखिएपछि उक्त गिटीसहितको ढाला नियन्त्रणमा लिएको टोलीका सहभागीहरूले बताए । इन्जिनबिनाको ढाला र ढालामा पनि कुनै नम्बर अङ्कित नभएकोले पनि गिटी भारततर्पm लैजाने तयारी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । तस्करहरूले दिउँसो लोड गर्ने र रातको समयमा सीमा कटाउने गरेको टिहुकीका बासिन्दाहरू बताउँछन् । नियन्त्रणमा लिइएको ढाला प्रहरी चौकी टिहुकीमा राखिएको छ । सो ढालाको इन्जिन तथा धनी पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको जिल्ला प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । मकवानपुरको मनहरीबाट आयात गरिने गिटी नेपालभित्र वैधानिक मानिन्छ । नेपाल सीमा क्षेत्रभित्र प्रतिसिएफटी ५३ रुपैया पर्छ
वीरगंजमा सत्यनिष्ठ सम्मेलन
प्रस, वीरगंज, ९ कात्तिक/ एकान्उटाबिलिटी ल्याब र वीरगंज महानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा सदाचारिता र सुशासन प्रवद्र्धनलाई संस्थागत गर्न वीरगंजमा सत्यनिष्ठ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनका प्रमुख अतिथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले सदाचारी र निष्ठावान् व्यक्ति बन्न सकस हुने भएपनि मानिसले चाहेको खण्डमा सदाचारी बन्न सक्ने बताए। उनले सदाचार आपूmभित्रैबाट खोजिनुपर्ने बताउँदै कुनै पनि व्यक्तिले चाहेको खण्डमा निष्ठाको जीवन व्यतीत गर्न सक्ने दाबी गरे । पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रधानमन्त्रीसमेत बोलाएर सोधपुछ गर्ने हैसियत भएकोले त्यहाँका कर्मचारीहरू अझ बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले अख्तियारका कर्मचारीहरूले समेत घूस खाने गरेको खुलासा गरे । मेरो बेलामा पनि अख्तियारका कर्मचारीहरूले घूस खाने गरेको बताउँदै त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई कारबाई गरेर तत्कालै अख्तियारबाट हटाउने गरेको बताए । उनले अख्तियारका कर्मचारीहरू पनि यही समाजबाट गएकाले उनीहरूमा पनि कमीकमजोरी हुनु स्वाभाविक भएपनि त्यस्